IPirates neChiefs izohlangana kwi-Soweto derby | Scrolla Izindaba
IPirates neChiefs izohlangana kwi-Soweto derby
Umqeqeshi weOrlando Pirates, uJosef Zinnbauer ukhethe umgadli weKaizer Chiefs uSamir “Kokota” Nurkovic njengomuntu oyingozi kubadlali abangabavikeli eqenjini lakhe. IJalimane lisebenza kanzima lilungiselela umdlalo obhekwe ngabomvu wase-Soweto.
Lo mdlalo we-DStv Premiership uzobanjelwa eOrlando Stadium ngoMgqibelo ngo-3.30 ntambama. Imvamisa indawo enkulu efana ne-FNB Stadium ibizosingatha umdlalo omkhulu kangaka, kodwa i-Covid isho ukuthi abekho abalandeli abavunyelwe ezinkundleni. Ngakho-ke iOrlando Stadium izosingatha okokuqala ngqa selokhu yalungiswa ngemuva konyaka wezi-2009.
“USamir Nurkovic ubuyile futhi ungumdlali obanikeza ithuba kanti futhi nesikwati abanaso njengamanje kusho ukuthi angeke sithole amaphuzu amathathu kalula. Le yimpi. Lona ngumdlalo omkhulu, futhi banaye umqeqeshi onesipiliyoni esiningi kule ligi futhi oseke wawina izicoco,” kusho uZinnbauer.
AmaBhakabhaka athole ithuba elihle laMakhosi kule sizini emihlanganweni yawo emibili edlule kwi-MTN8. Bashaye amagoli amahlanu emidlalweni emibili.
Kodwa emihlanganweni yabo yokugcina yeligi ngesizini edlule, iChiefs ibihamba phambili ngemuva kokunqoba yomibili imidlalo kanti uZinnbauer ubekhona ukuyibona. Uthe bayazi ngesimo esihle seChiefs esisanda kwenzeka futhi ngeke kube umdlalo olula.
“Abadlali bami bayazi ukuthi kwenzakalani njengamanje neKaizer Chiefs esanda kuqhamuka. Yebo, mhlawumbe abayiqalanga kahle isizini kodwa njengamanje sebesondela kithi. Futhi bathola amaphuzu amaningi etafuleni futhi siyazi ukuthi banesikwati esikhulu nesikwati esihle futhi. Kuzoba nzima kuwo wonke umuntu.”
Womabili la maqembu eza kulo mdlalo esedlale ngokulingana emidlalweni yawo yaphakathi nesonto nezimbangi zawo. IPirates idlale ngokulingana ngo 1-1 neTS Galaxy kwathi Amakhosi nawo athola iphuzu ngesikhathi ebhekene neBaroka ebinamaphuzu afanayo.
Umthombo wesithombe: @KaizerChiefs